အရူးလုပ်ခံရခြင်း … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အရူးလုပ်ခံရခြင်း …
Posted by weiwei on Jul 13, 2011 in Creative Writing, Short Story | 20 comments
တော်တော်အောင့်သီးအောင့်သက်ဖြင့် ခံပြင်းလှပါသည်။ ဥပဒေဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်၊ လူမှုရေးရှုဒေါင့်ကပဲကြည့်ကြည့် ခွင့်လွှတ်ပေးရမည့်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေပါသည်။ ဒါပေမယ့် ခံလိုက်ရသူများမှာတော့ ….
မည်မျှဆိုးဝါးသည့် ပြစ်မှုပင်ဖြစ်ပါစေ တရားခံက စိတ်မနှံ့လို့လုပ်တာပါဆိုလျှင်ဖြင့် ဥပဒေအရ အရေးယူလို့ မရနိုင်ပါ။ လမ်းမအလယ်မှာ အော်ဆဲနေပေမယ့် ရူးနေလို့ပါ ဆိုလျှင်ဖြင့် ဗွေယူလို့မရနိုင်ပါ။ သို့သော်လည်း တကယ်မရူးပဲ ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကလော်တုတ်သွားသည်ကတော့ ….
စိတ်မထိန်းနိုင်အောင် ဒေါသထွက်ပြီး ကတ်ကတ်လန်အောင် ရန်တွေ့နေကြသူများကို မြင်ဖူးပါသည်။ ဒေါသအလျှောက် စိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ တစ်ယောက်တစ်ခွန်း အော်ကြီးဟစ်ကျယ် စကားများရန်ဖြစ်ကြသည်သာများပါသည်။ အခုရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာက အကွက်ကျကျ အရူးလုပ်ခြင်းတစ်မျိုး …
မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက်က သူ့နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ အရမ်းလဲခင်တယ်။ မကျေမနပ်လဲဖြစ်နေတယ်။ ခင်တဲ့စိတ်ကတစ်ဖက်၊ မကျေနပ်စိတ်ကတစ်ဖက်နဲ့ ရန်ဖြစ်လောက်အောင် လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်လဲမရှိဘူး။ တခြားသူတွေကိုလဲ မကျေနပ်ချက်တွေရှိနေပေမယ့် ပြောရလောက်အောင်လဲ သူ့မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးမရှိဘူး။ အားလုံးက ရာထူးတန်းတူ အသက်တွေလဲ မတိမ်းမယိမ်းတွေဆိုတော့ …
သူမကျေနပ်ဖြစ်နေတာကိုလဲ တခြားသူတွေက လုံးဝမရိပ်မိကြဘူး။ ဒီလိုနဲ့ အချိန်ကြာလာတော့ သူဘယ်လိုမှ မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပဲ ပေါက်ကွဲပါတော့တယ်။ ပေါက်ကွဲပုံက မိုးလင်းကနေစပြီး တစ်စတစ်စ သူမကျေနပ်တာတွေကို နဲနဲခြင်းစပြောပါတယ်။ ပြောရင်းပြောရင်း အရှိန်ရလာတော့ သူ့ကိုယ်သူ တခြားလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်။ သူတို့ဌာနရဲ့ အကြီးအကဲတစ်ယောက်လို့ သူ့ကိုယ်သူပြောတယ်။ ပြီးတော့ ရီသံအကျယ်ကြီးနဲ့ … ခါတိုင်းခေါ်နေကျ မ…. တွေ ကို….. တွေ တပ်မခေါ်တော့ပဲ နံမည်တွေကို တုံးတိတိခေါ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲပြီး သြဇာပေးပါတော့တယ်။ အားလုံးလန့်ဖြန့်ပြီး ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ သူ့မိသားစုကို အကြောင်းကြားပြီး အမြန်လာခေါ်ခိုင်းရတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်ကနေ ခွင့်တစ်ပတ်ယူလိုက်ပါတော့တယ်။ စိတ်ရောဂါဆရာဝန်နဲ့လဲ သွားပြပြီး ဆေးသောက်ရတယ်။
ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေက သူ့ကို သနားနေရတယ်။ သူပြန်ကောင်းလာပါစေ။ ဘာမှ မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ငါတို့ဘာများသူ့ကို အမှားလုပ်မိလို့လဲ။ နောက်ကို ဘယ်လိုဆင်ခြင်ရင်ကောင်းမလဲနဲ့ တစ်ပတ်တိတိ ရူးကြောင်ကြောင်တွေ ဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်။ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း သူ့မိသားစုကို တိတ်တဆိတ်ဖုန်းဆက်ပြီး သတင်းမေးရတာလဲ အမောပါပဲ။ မေးလိုက်တိုင်းလဲ အိပ်နေတယ် .. သက်သာပါတယ် ဆိုတဲ့ အဖြေကိုသာ ရခဲ့ကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်ပတ်ပြည့်တော့ ဘာမှမဖြစ်သလို အလုပ်လာဆင်းပါတယ်။ အရာအားလုံးက ပုံမှန်အတိုင်းပဲ။ နဲနဲလေးမှတောင် မျက်နှာမပျက်ပါဘူး။ သူရူးသွားတဲ့တစ်နေ့တာအချိန်ကို မှတ်မိလား မမှတ်မိလားဆိုတာတော့ သူကိုယ်တိုင်ပဲ သိပါလိမ့်မယ်။ သူကအကောင်းပကတိနဲ့ အားလုံးကို စကားပြောနေချိန်မှာ အပြောခံရတဲ့သူတွေ စိတ်ထဲမှာတော့ ဇဝေဇ၀ါ အတွေးတွေ ၀င်ကုန်ပါတယ်။ တကယ်မေ့သွားတာလား? မေ့ချင်ယောင်ဆောင်တာလား? ရူးချင်ယောင်ဆောင်တာလား?
သေချာတာတစ်ခုကတော့ အရူးလုပ်ခံလိုက်ရတာပဲ ….
သူမှ တပါး အခြား မသိ
နောက်တချက် personality changes သို့မဟုတ် တမင်သက်သက် အရူးလုပ်တာ
ယူအက်စ်အပါအ၀င်.. ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့… သူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မှတ်တမ်း..ဆေးမှတ်တမ်းထဲ.. တခါစိတ်ဂယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်၍ ဆေးသောက် တပါတ်ခွင့်ယူဖူးပါသည် စာရင်းဝင်သွားမှာပေါ့..။
တခြားအလုပ်ပြောင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်.. ကလေးတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ ဆိုရှယ်အလုပ်တွေဖြစ်ဖြစ်.. ပရောဖက်ရှင်နယ်လိုင်စင်တွေဖြစ်ဖြစ်… ယူဖို့ခက်သွားတော့မှာပါ…။
ခရက်ဒစ်ဟစ်စရီမှာလည်း… ဖျက်မရတာမို့ .. ငွေချေးမဲ့သူတွေအတွက်လည်း… ဒန်တန်တန်ပေါ့…။
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ရင်လည်း … ပြသနာဖြစ်မှာပဲ…။
အကျိုးဆက်တွေ အများကြီးနဲ့ လဲလိုက်ရတယ်ပဲ ဆိုပါတော့…
တမင်တကာ ၇ူးချင်ယောင်ဆောင်လုပ်တာဆိုရင်တော့ …ဘယ်တန်မလည်းနော…။
ပြောရရင်..မြန်မာပြည်မှာ လူတွေရဲ့ရာဇ၀င်ကို မှတ်တမ်းထားသင့်နေပြီ…။
လူတိုင်း မတူညီတဲ့ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ရှိတာမို့ .. အလွယ်လေးထင်ပါတယ်..။
မှတ်တမ်းကို smart card မှာ ထည့်သိမ်းခိုင်းထားလို့ ရနေပါပြီ .. အစိုးရကလဲ လုပ်ချင်နေတယ် လို့ သိရတယ် .. မှတ်တမ်းကဒ်ပြားထဲမှာ ထည့်သွင်းရေးလို့ရတယ် .. ထည့်တာ ဖျက်တာကို လုပ်ပေးတဲ့လူ သမာသမတ် ရှိမှ ဖြစ်မှာ
ယူအက်စ်မှာ.. အဲဒါမျိုးတွေက.. ပါ့ဗလစ်ကိုတောင်(အတိုင်အတာတခုအထိ) လုပ်ပစ်တယ်..။
ဆိုတော့.. ကိုယ်မသိပဲ..ကိုယ့်မှတ်တမ်းထဲပါနေရင်..ဘယ်သူ တကယ်မဟုတ်ပဲ.. ထည့်သလည်း လိုက်ပြီး တရားစွဲနိုင်မျာပေါ့..။
ဖျက်တာကလည်း.. ဒီလိုပဲ..။ ဖျက်တိုင်း လေ့ာဂ်ရှိနေတာမို့..ဖျက်တဲ့သူက.. တော်တော်အရင်းကြီးသွားတာပေါ့..။
တရားရေးနဲ့.. လော့အင်ဖို့စ်မန့်ဌာနတွေကတော့ … အဆင့်မတူပဲ.. တမျိုးပေါ့လေ..။
နောက်တာ မဟုတ်ပါ။ မှတ်ပုံတင် တခါလုပ် ၆ ကျပ်ပါတဲ့။ ဧရာဝတီ သတင်းတိုမှာတော့ ဒီလို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ကို ၆ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ပြုလုပ်ပေးရန် သတ်မှတ်ထားကြောင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန ၀န်ထမ်းတဦးက ဧရာဝတီကို ပြောပြသည်။ ထိုသတ်မှတ် ဈေးနှုန်းမှာ မှတ်ပုံတင်ဟု လူသိများသည့် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်၊
ရေးသား ဖြည့်စွက်ရသည့် လျှောက်လွှာတို့ အတွက် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားပြုလုပ်ရာတွင် ကုန် ကျငွေများမှာ
စတင်လျှောက်ထားရာ၌ ခြောက်ကျပ်၊ လဲလှယ်ပါက သုံးကျပ်၊
မိတ္တူလျှောက်ထားပါက ကျပ် ၁၀ သာပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး
အိမ်ထောင်စုစာရင်း များပြုလုပ်ရာတွင် မည်သည့်ကိစ္စရပ်မဆို
နေ့ချင်းပြီး အခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ထုတ် ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
ဟုတ်မဟုတ်တော့ သွားလုပ်ကြည့်မှ သိမှာပါပဲ။ ဟုတ်တယ်ဆိုရင်လည်း ချီးကျူးရအောင် လက်တို့လိုက်ပါဦး။ တကယ်သာ ဟုတ်ခဲ့ရင် တစ်ကျပ်တန်၊ ငါးကျပ်တန် ငွေစက္ကူတွေလည်း တကြော့ ဈေးကောင်းနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ကျပ်တန်လို အကြွေက ရှားကရှားနဲ့။
အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ကို ၆ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ပြုလုပ်ပေးရန် သတ်မှတ်ထားကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန ၀န်ထမ်းတဦးက ဧရာဝတီကို ယနေ့ ပြောပြသည်။ ထိုသတ်မှတ် ဈေးနှုန်းမှာ မှတ်ပုံတင်ဟု လူသိများသည့် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်၊ ရေးသား ဖြည့်စွက်ရသည့် လျှောက်လွှာတို့ အတွက် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
၆ကျပ်ဆိုတာ ရွှေ ၆ ကျပ်သား ကိုပြောတာ ( ၉၉၉၉ )ရွှေနော်
ဒါမျိုးတွေကို ကြို ဆိုပါတယ် ။ ရှေ့အစိုးရများ လက်
ထက်က အမွေဆိုးေ တွ ဟာ ဒီခေတ် ဒီ အခါ ထဲ မှာ သယ် မလာ တာတော့ ဖြင့် အင်မတန်မှ ၀မ်းသာကြို ဆိုရမှာပါ ။
နောက် …. နိုင်ငံကူး လက်မှတ်တွေကို ယခင်က 30 ရက်လောက် ကြာမြင့် စွာစောင့် ဆိုင်းပီးမှ ရကြပါတယ် ။ အခု
3 ပတ်နဲ့ တင် ရတော့ တဲ့ဘယ်လောက်ေ ကါင်း လိုက်သလဲ ပြ ည်သူတွေ အတွက် ပြည်ထဲေ ရး ၀န်ကြီးရဲ့ ကြိုးပမ်း
အားထုတ်မှု့ တစ်ခုကို မှတ်တိုင် ထူ လိုက်ပြန်ပါပီ ။ ၀မ်းသာ စရာ တွေပါ ။ ပြည်သူတွေ ၀မ်း သာကြပါတယ် ။
ဖုံးဆိုလဲ ကြည့် ဟိုး……… အရှေံ့ က အမွေ ဆိုးတွေကို ရင်ဆိုင်စ ရာမ လိုတော့ ပါ 15 သိန်းဆို သေ ချာတာက ဟမ်း
ဆက် အပါအ၀င်2လုံး ကိုင်လို့ ရပါ တယ်ခင်ဗျား ….. .နောက် bill ကို အချိန် ကုန်ခံ တန်းစီစရာ မလိုတော့အောင်
prepaid card တွေကို စီစဉ်ပေးထားတယ် ဒီထက်မက ကျယ်ကျယ်ပြ န့် ပြန့် လုပ်ဘို့ လဲ ပြင် ဆင်နေကြပီ ။ ပြည်သူ
တွေကို တိုက်ရိုက် အကျိုး ဖြစ်ေ စပါတယ်။ ဘယ်လောက် ၀မ်း သာလိုက်ကြသလဲ ။
နောက်ထပ် နောက်ထပ် ၀န်ကြီး
ဌာနတွေ ပြည်သူ အတွက် ဘာတွေ ဘယ်လောက် လုပ်ကြ အုံးမလဲ ဆိုတာကိုလဲ မိမိတို့တင်မြော က်ထားသော
သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးးများ ထံမှ လဲ မျှော်လင့်ေ နကြပါတယ် ။ ဥပမာ အခွန်ဆိုင်ရာ ကစ္စ ။ တရားစီရ င်ရေး ကိစ္စ။
ကားနဲ့ ပါတ်သ က်သောကိစ္စ ။ နိုင်ငံခြားေ ငွရေးကြေးရေးလဲလှယ်ရေး ကိစ္စ စသည် စသည် ….. မျှော်လင့်နေကြ
ပါပီ။ ပြည် သူတွေနဲို့က်ရိုက်သ က်ဆိုင်နေ တဲ့ အတွက်ကြောင့်ြ ဖစ်ပါသည် ။
ရှေ့ အစိုး ရများ လက်ထက်
က အမွေ ဆိုးကြီး ကို တပ်တပ်မ က်မက် သယ်ဆောင်လာသော ဌာန တစ်ခုတော့ ရှိနေသေးရဲ့….အခုပ်ြသူတွေ
သွားရေး လာရေး သက်သာစေေ သာငှါ ကားများကို ထုတ်လုပ်ရောင်း ချနေသောစက်မှု့( ၂ ) ၀န်ကြီးဌာနဖြစ်ပါ
တယ် ။ အခုချယ်ရီကားများကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြ င့် ရောင်း နေလေရဲ့။ ပြည်သူတွေ အတွက် . ပြည်သူတွေအ
တွက် တဲ့………. တ ကယ့် ပြ ည်သူတွေ ကြားမှာတော့အဲလို ဟုတ် မဟု တ်တော့ ပြည် သူတွေက တော့ သိနေ
ပါပီ ။ ဖစ် သင့်တာက များများ ရောင်းရလေ နိုင်ငံ အတွက် အခွန်များ များရလေ ဆိုတာ သာမှန်ရင် များများရောင်းရအောင် စီမံသင့် တယ်
သင့်တယ်လို့မြင်လို့ ပါ ။ ဒီကုမ္မဏီ တစ်ခုထဲနဲ့ဝယ် လိုအားကို မဖြည့် ဆီးနိုင်ရင် နောက် ကုမ္မဏီ တစ်ခု ထပ်ကမ်း
လှမ်းပေါ့ ။ ပြည်သူတွေဆီက
အဲလို ဓါးမြ တိုက်ပီး ကိုယ်ကျိုး မရှာသင့် ဘူး။
ဦးဦး ကိုကို ၊မမတို့ရယ် မီးမီးကိုရှ င်းပြကြ ပါအုံး ၆ကျပ် ဆိုတာ ဘာကိုေ ခ်ါတာလည်း ဟင်။။
တရားဝင်ကေ ပးရတာက ခြောက်ကျပ်၊ ဒါပေမယ့် တရားမ၀င်ေ ပးရတာက သုံးသောင်းကျ ပ်…..ဘာမှ မထူးပါဘူးကွ
လက်မှတ်ယူလိုက်ပုံကတော့ အကယ်ဒမီတောင် ပေးချင်စိတ်ပေါက်မိပါတယ် …
Hysteria ဘဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။သူတို့ခမျာလည်း သနားစရာကောင်းပါတယ်။
မွန်းကျပ်တဲ့ စိတ်ကို ထွက်ပေါက်ရှာနည်း တစ်မျိုးပါဘဲ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီအခိုက်အတန့်မှာ နာမည်ပျက်ကျန်ခဲ့မှာတောင် မစဉ်းစားနိုင်အောင် self control လွတ်သွားတာပေါ့။
နည်းနည်းစီစုပြီး ကြာတော့ မခံနိုင်တော့တဲ့ပုံပဲ
မသိတာကတော့ သူပဲတကယ်ရူးမိသွားလား၊ တခြားလူကပဲ အရူးဖြစ်သွားလားမသိဘူး
ဟိုနေ့က ကြားတော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ပေးနေတာ.. တွေးတောင် တွေးမိနေသေးတယ် စိတ်ဖိစီးမှု များရင် ဒီလို ဖြစ်တတ်လား.. အဲလို ဖြစ်တတ်ရင် ၁ရက်လောက် မကျေနပ်တဲ့ လူတွေ သွားပြီး နရင်းရိုက်ချင်လိုက်တာလို့.. တွေးမိတာ ပြောပါတယ်။
ဆူးကို ထောက်ခံပါတယ်။ ကိုယ်လည်း အဲလိုမျိုးကြုံဖူးပြီး ဘယ်လို တုန့်ပြန်ရမှန်း မသိလို့။
အဲဒီ hysteria ရောဂါမျိုးဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာပဲ ဖြစ်တတ်ပါသလား၊အမျိုးသားတွေမှာရော ဖြစ်တတ်ပါသလား။မိမိရဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်ပေါ်မှာပဲမူတည်နေပါသလား….တစ်ချို့သော အမျိုးသားတွေကိုအဲဒီပုံစံနဲ့ တွေခဲ့ဘူးလို့ပါ။
မကျေနပ်ချက်တွေ၊ ခါးသီးတဲ့ခံစားချက်တွေကို ပေးတဲ့သူကပေးနေတာမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ယူနေတာ သနားစရာတော့ကောင်းတယ် ….
အခုတော့ သူ့ရှေ့မှာ စကားတောင်ကျယ်ကျယ်မပြောဖြစ်ကြတော့ပါ … ပြောနေတာက ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲထဲကဖြစ်ပေမယ့် သူက သူ့ကိုစောင်းပြောင်းတယ်လို့ ထင်နေတတ်လို့ပါပဲ …
အဲဒါ ကိုယ့်နေရာ ကိုယ်ရွေးတယ်လို့ပဲ ပြောရမယ်။ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကပဲ ကိုယ့်ကို ချောင်သွင်းလိုက်တာပေါ့။
အလကားနေရင်း ဂေါက်နေတဲ့လူတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ စိတ်ညစ်ဖို့ ကောင်းတယ်… အဲ့ဒါ ရူးတာမဟုတ်ဘူး .. ရူးချင်ယောင်ဆောင်တာ … ။ အဲ့ဒီအချိန် အရူးလုပ်ခံရတဲ့ လူထဲက တစ်ယောက်ယောက် ပွဲထကြမ်းလျှင် အတော်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲပဲ … ။
သူ.ကို ရူးသွားပြီးဆိုပြီး သေချာအောင် အရူး တွေလုပ်သလို. ရှော့တိုက်ကုတာ..
ဟိုတလောကပဲ5movie မှာပြသွားတယ် .. ထောင်ကျတော့ အလုပ်စခန်း မသွားချင်လို့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး နေတာ .. ဆေးရုံကလဲ ထွက်ပြေးချင်နေတုန်း ဆူမူလို့ .. shock ရိုက်ခံရတယ် .. ပထမအကြိမ်မှာတော့ ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် နောက်တကြိမ်မှာ တကယ်ရူးသွားတဲ့ ကား .. ထွက်တာတော့ အတော်ကြာခဲ့ပြီ .. ဗီဒီယို တိတ်ခွေခေတ်ကတည်းကပဲ
တကယ်တော့ လောကကြီးမှာ အဆင်မပြေမှုတွေက အများကြီး။
နှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့သူကို သနားစရာ လိုသလား မလိုဘူးလား။
နှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့သူကိုမြင်ရတာ သနားဂရုဏာသက်စရာ ….
လူဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ အသိဥာဏ်ပါရဲ့သားနဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်ကို သိအောင်မလုပ်နိုင်တာ သနားစရာကောင်းတာပေါ့ …